Ilhan Cumar ayaa Trump siisay jawaab la yaab leh kadib markii uu weerar afka ah ku qaaday… – Hagaag.com
Ilhan Cumar ayaa Trump siisay jawaab la yaab leh kadib markii uu weerar afka ah ku qaaday…
Dagaal dhanka warbaahinta ayaa mar kale ka dhex qarxay madaxweynaha Mareykanka Donald Trumo iyo Ilhaan Cumar oo ah xldhibaanad ka tirsan Congress-ka Mareykanka islamarkaana asal ahaan kasoo jeeda Somalia.
Trump ayaa weerar cusub ku qaaday xalay Ilhaan xilli uu khudbad ku aadan ololihiisa doorashada uu ka jeedinayay magaalada Moon Township ee gobolka Pennsylvania.
Ilhaan Cumar ayuu u sheegay in ay tahay qof aan u dhalan Mareykanka.
”Waa ku guuleysaneynaa Minnesota iyada darteed. Waxa ay noo sheegeysaa sida aan u maamuleyno dalkeenna. Sidee ayuu u yaallaa waddankaaga?”, ayuu ku yiri khudbaddiisa madaxweyne Trump.
Wax yar kadib khudbaddaasi Ilahaan Cumar ayaa barteeda Twitterka ugu soo jawaabtay Trump, waxaana ay u sheegtay in waddankeedu yahay Mareykanka.
” Marka ugu horreysa, waddankeygu waa kan. Waxaana xubin ka ahay baarlammaanka ku ridi rabay. Marka xigta waxaan dalkeyga kasoo qaxay anigoo 8 jir ah, sideed jirna wax ma maamulo iskastoo aad dalkkeenna u maamusho sidi ilmo yar.”, ayay tiri Ilhaan.
Dhowr jeer ayaa waxaa Trump lagu dhaleeceeyay in uu dabadhigtay haweenka midabka leh ee ku jira baarlammaanka kuwaas oo uu ula baxay «The Squad» islamarkaana kala ah Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), Rashida Tlaib, Ilhan Cumar iyo Ayanna Pressley.
Ilhaan Cumar ayaa u matasha Congress-ka Mareykanka gobolka ay Soomaalidu ku badan tahay ee Minnesota.